Etu ị ga-esi kwado iPhone akpọchiri / Disabled Na-enweghị passcode (Nzọụkwụ Dị Mfe)
Summary: Isiokwu a ga-depụta ọtụtụ ekwe omume ụzọ ka ị ndabere gị ekpochi / nkwarụ ma ọ bụ na-adịghị anabata-na ihuenyo iPhone enweghị abanye a passcode. Ọzọkwa, ị ga-amụta nkà nke akpọchi gị ekpochi / nkwarụ iPhone.
Backkwado data na iPhone dị mfe. Otú ọ dị, nsogbu dị otú ahụ dị mfe nwere ike ịbụ ike imezu ma ọ bụrụ na iPhone gị bụ akpọchi ma ọ bụ nwee nkwarụ i wee chefu passcode na ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na gị na iPhone nwere ihuenyo mebiri emebi ma ọ bụ na-anabataghị, O siri ike ndabere data na ya.
Nọmalị, dị ka iPhone data ndabere, mkpa ka ị kpọghee ya mbụ wee jiri iTunes ma ọ bụ iCloud ime nkwado ndabere.
Ya mere, ọ bụrụ na data na mkpọchi gị / enweghị nkwarụ iPhone dị oké ọnụ ahịa nye gị ma ịchọrọ ịkwado ya tupu iziga ya ka ọ rụzie, lelee usoro ndị a ndabere gị ekpochi / nkwarụ iPhone enweghị abanye a passcode.
Method 1: Ndabere gị ekpochi / nkwarụ iPhone na iTunes
Method 2: Ndabere gị ekpochi / nkwarụ iPhone na iOS data ndabere ngwá ọrụ
Ebe ọrụ: Wepụ data site na nkwado ndabere gara aga ma ọ bụ ngwaọrụ mgbe ịnọ na mkpa ngwa ngwa
Atụmatụ: Esi kpọghee ekwt gị iPhone mgbe ị kwadochara ya
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone ka iTunes tupu, ị ka nwere ike iji iTunes ndabere gị ekpochi iPhone na a tụkwasịrị obi na kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ iPhone na iTunes
Jikọọ iPhone na kọmputa tụkwasịrị obi na eriri USB, iTunes ga-akpaghị aka ẹkedori na mmekọrịta gị iPhone mgbe ị jikọọ gị iPhone na kọmputa a tupu.
Nzọụkwụ 2 Ndabere iPhone ekpochi na iTunes
Choo akara ngosi iPhone gi na Ngwaọrụ, Pịa na ihe oyiyi nke iPhone ịbanye ndabere interface, wee họrọ ndị Summary bọtịnụ dị n'okpuru.
Mgbe ahụ, kwaga na backups, pịa Weghachite Ugbu a, iTunes ga - amalite ịchekwa data gị na PC.
Nwere ike ịchọta faịlụ ndabere na kọmputa gị site na enyemaka nke njikọ a - [Chọta ndabere iTunes] iTunes ndabere Ebe Windows na Mac.
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone ka iTunes tupu, ma ọ ada ada ka iTunes oge a na iTunes na-arịọ maka “Tụkwasịnụ Kọmputa a".
Nke a bụ ma eleghị anya n'ihi na iPhone gị anọwo gbanyụọ ebe ọ bụ na mmekọrịta ikpeazụ, ma ọ bụ nke a bụ abụghị otu kọmputa na ị jikọtara ngwaọrụ gị.
Usoro 2: Weghachi iPhone ekpochi ya na iOS ndabere ngwaọrụ
FoneLab, mara dị ka a dị ike iOS manager, bụ otu nke kasị mma ngwaọrụ nke e mere na-gị data mma.
Ngwá ọrụ a nwere ike ịnweta gị ekpochi iPhone enweghị akpọchi gị iPhone, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na gị na iPhone bụ akpọchi / nwere nkwarụ ma ọ bụ nwee ihuenyo anaghị anabata ozi.
Iji chekwaa data gị n'ụzọ zuru oke, FoneLab nwere ike ndabere, gbakee, ma weghachite otutu akuku data, tinyere foto, ọdịyo, vidiyo, kọntaktị, ozi, ndetu, akụkọ mkparịta ụka nke WhatsApp, Kik, na Line, wdg.
Ọzọkwa, ọ na-enyere gị aka previu ma họrọ data ịchọrọ ndabere, nke na-echekwa gị oge na ike dị ukwuu.
Nzọụkwụ 1 Download, wụnye na ẹkedori software na PC gị
Nzọụkwụ 2 Họrọ ndabere data iOS ma weghachite
họrọ Ndabere iOS Data & Weghachi na interface, ma jikọọ iPhone na PC gị na eriri USB.
Nzọụkwụ 3 Kwado data gị
họrọ Ndabere iOS Data, mgbe ahụ, pịa Malite aga n'ihu.
Ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ data iji kwado ndabere site na udi. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịkwado data niile, họrọ Họrọ Ha niile.
Mechaa ahọrọ data, pịa Osote iji kwado data ahọpụtara. A ga-echekwa data ahụ na folda PC ị họrọ.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkwado data gị ọ bụrụgodi na ịmebeghi iTunes. Ọzọkwa, faịlụ ndabere gị ga-adị mfe iji weghachi ma lelee.
Na ọrụ nke FoneLab, gị data ga-edozi iji, nke na-enye gị oké mma mgbe Iweghachi. Mgbe iPhone gị na-agbachi mgbe e mesịrị, i nwere ike iweghachi gị data site na nke a ndabere gị mere.
Ọrụ: Wepụ data site na nkwado ndabere gara aga ma ọ bụ site na ekwentị a
Ọ bụrụ na ị na-na na oké mkpa nke data na ekpochi iPhone, i nwere ike wepụ ya si a gara aga iTunes ndabere ma ọ bụ iCloud ndabere ma ọ bụrụ na ị mere otu.
Ọnọdụ 1 Wepụ data gị na faịlụ iTunes / iCloud gara aga
Nwere ike wepụ gị data si gara aga iTunes ndabere faịlụ mgbe e nwere ihe ọ bụla.
Ma ọ bụ, ma eleghị anya, ị tụgharịa na iCloud akpaaka-ndabere atụmatụ, na oge ọ bụla ị na-ana ma ọ bụ igbachi gị iPhone, iCloud ga ndabere gị data na ya.
Ọ bụ ezie na ijide n’aka ma ọ bụrụ na echekwara data ịchọrọ ịchọrọ na faịlụ nchekwa kachasị ọhụrụ, jiri ochie iPhone ma ọ bụ iPad.
Wepụ na ngwaọrụ ochie, ma gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Tọgharia ọdịnaya niile na ntọala.
Mgbe ahụ, ike na ngwaọrụ na melite ya ọzọ. Mgbe ị na-edozi, họrọ Weghachi Site na iCloud ndabere ma ọ bụ weghachi site na iTunes ndabere ya, họrọ faịlụ kachasị ọhụrụ iji weghachi na ngwaọrụ ochie gị.
Emecha ntọlite, niile data si gara aga ndabere faịlụ ga-ndenye gị ochie iPhone.
Ọ bụrụ na ndị data si ọhụrụ ndabere faịlụ bụ kpọmkwem ihe ị na-anya, ị pụrụ ịkpali kpọghee gị nkwarụ iPhone.
I nwekwara ike ịhọrọ wepụ data ụfọdụ iche iche site na iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere faịlụ site na iOS data mgbake ngwá ọrụ.
Lelee nke a: Kedu ka m ga-esi weghachite iPhone site na iTunes ndabere na iCloud ndabere iche iche?
Ọnọdụ 2 Weghachite data gị na iCloud.com
Nwere ike ịbanye n'ime iCloud.com ma gbalịa wepụ ụfọdụ ezigbo oge data echekwara na iPhone gị site na ibe.
Dị iche na iCloud ndabere faịlụ, iCloud.com bụ naanị ike ịzọpụta ụfọdụ edemede nke ezigbo oge data gị iPhone. Ma ihe iCloud ndabere faịlụ. ọ jupụtara na data na-apụ na iPhone gị site na oge ị mere ndabere.
Soro nke a:
Banye iCloud.com na ihe nchọgharị. Mgbe ị banyere, họrọ data ụdị na ị chọrọ iji weghachite. Pịa akara ngosi na ịhụchalụ data ahụ, wee chekwaa ha na PC gị.
Ọnọdụ 3 Wepụ gị mkpa data site na ngwaọrụ ozugbo
Ọ bụrụ na echekwara data dị mkpa na iPhone ekpochi na-enweghị faịlụ ndabere gara aga, ịnwere ike wepu ya na ngwaọrụ ahụ site na enyemaka nke ụfọdụ ngwaọrụ mgbake data iOS.
Lelee njikọ a iji chọpụta otu esi ewepụta data gị na ngwaọrụ ozugbo yana ngwaọrụ mgbake iOS.
G THISKWU EGO: [Pro] Otu esi nwetaghachi data iPhone na iPhone / iOS Data Recovery
Ndị a bụ ndị niile kwere omume ụzọ ka ị ndabere gị ekpochi ma ọ bụ nkwarụ iPhone enweghị abanye passcode.
iTunes na ngwa data iOS data - FoneLab niile dị maka ịkwado iPhone akpọchiri / nwere nkwarụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ data, gbalịa ụzọ 3 dị mfe iji chọta data gị.
Olileanya, nkuzi a nwere ike inyere gị aka na mmechuihu ma ị mechara nwee data gị.
Ndụmọdụ: Ihe ị ga-eme mgbe ị kwadochara data gị
Mgbe ị na-ọma eme ka a ndabere, gị iPhone ka na-ekpochi na ị na-enweghị ike iji ya. ị nwere ike ịnwale Unlocker iPhone mkpọchi ihichapụ passcode nke ngwaọrụ gị nwere nkwarụ.
Unlocker iPhone mkpọchi bụ a pụrụ ịdabere na oru oma ngwá ọrụ na-enye mfe na bara uru na ọrụ maka akpọchi iPhone.
Ọ bụrụ na gị iPhone nwere nkwarụ ma ọ bụ kpọchiri, ka Nkeji iPhone wepụ gị iPhone passcode na ị pụrụ nanị nweta gị iPhone enweghị a passcode.
Aiseesoft iPhone Unlocker ike :
Ichicha ihuenyo mkpọchi na ọnụego ọganihu dị elu;
Hichapụ passcode, ID ID, ma ọ bụ ID ID;
Nyere wepu Apple ID ma tọgharịa koodu mmachi.
Budata na n'efu ：
Nzọụkwụ ịhichapụ paswọọdụ na gị iPhone ekpochi
Wantchọrọ ijide iPhone gị aka ọzọ na ihe niile na-arụ ọrụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ibudata Nkeji iPhone.
Nzọụkwụ 1 Launch Nkeji iPhone
Na interface, họrọ Hichapụ passcode kpọghee gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 Budata ngwa ngwa
Kwenye ozi nke ngwaọrụ gị, pịa Malite ibudata otu yiri femụwe ngwugwu.
Kwụpụ 3 Kpọghe iPhone gị
Mgbe nbudata ya zuru, pịa Unlock aga n'ihu.
Pịnye na “0000”Na mmapụta windo iji kwado mmeghe.
Etu esi achọghachi foto site na iPhone nwere nkwarụ na-enweghị ndabere
Ndabere iPhone Data
Ndabere iPhone na-enweghị iTunes
Ndabere iPhone na Kọmputa
Mee iCloud ndabere
Ndabere iPad na iCloud
Ndabere iPhone foto
Ndabere Ndi ana-akpo na iPhone
Ndabere iPhone na Mac